चन्द्रकोटका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु कस्ले के चुनाव चिन्ह पाए ? - Gulminews
चन्द्रकोटका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु कस्ले के चुनाव चिन्ह पाए ?
२०७९ बैशाख १७, १८:२६
गुल्मी, बैशाख १७ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले शनिबार चिन्ह वितरण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा दलहरूले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाएका छन्।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाएका हुन्।
ती दलका चुनाव चिन्ह पहिल्यै तय भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आफूले चाहेको चिन्ह पाउने छैनन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि अनुसूची-२७ मा ४० वटा चुनाव चिन्हहरू राखिएका छन्। तीमध्ये नै एक उनीहरूको चिन्ह हुने आयोगले जनाएको छ ।
यसै सिलसिलामा गुल्मीमा पनि सबैजसो उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिन्ह बाँडिसकिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं १ अन्तर्गत चन्द्रकोट गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरु सबैले चुनाव चिन्ह पाएका छन् ,
कस्ले के के चिन्ह पाए त ?
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशनका कर्ण बहादुर थापा कुखुराको भाले चुनाव चिन्ह पाएका छन् । त्यस्तै अर्का उम्मेदवार नेकपा एमालेका चेतन बहादुर बस्नेतले सुर्य चिन्ह र गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका युबराज खत्री छेत्रीले गोलाकार भित्र हँसिया हथौँडा चुनाव चिन्ह पाएका छन् । अध्यक्षकै लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुरेश परियारलाई भने गुलाबको फुल चुनाव चिन्ह दिईएको छ ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष पदका लागि नेकपा एमालेकी राधिका अर्याललाई सुर्य, मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशनकी रितु सार्कीलाई कुखुराको भाले र गठबन्दनका तर्फबाट उम्मेदवार बिष्णु प्रसाद भण्डारीलाई रुख चुनाव चिन्ह दिईएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चन्द्रकोटले जनाएको छ ।
वार्ड नं २ र वार्ड नं ३ का लागि वडाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु कमल के.सी र टेक बहादुर पौड्याल खत्रीले कैँची चुनाव चिन्ह पाएका छन् । त्यस्तै वडा नं ६ का लागि वडाध्यक्षको स्वतन्त्र उम्मेदवार शंकर शर्माले पनि कैँची नै चुनाव चिन्ह पाएका छन् ।
उता वार्ड नं २ कै वडा सदस्य पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार कृष्णे सार्की, स्वतन्त्र महिला सदस्य उम्मेदवार बिष्णु कुमारी श्रीस र वार्ड नं ३ को दलित महिला सदस्य पदको उम्मेदवार सरस्वती श्रीस सार्कीले पनि कैँची नै चिन्ह पाएका छन् । वार्ड नं २ कै वडा सदस्य पदका अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष सार्कीले दुई कैँची चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छन् ।